Monday March 14, 2022 - 20:32:39 in Wararka by Xarunta Dhexe
Olena Zelenska, xaaska madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, ayaa dadka la wadaagaysay sawirro cajiib ah oo muujinaya dadaalka haweenka iyo sida ay dalkooda u difaacayaan duullaankii Ruushka ka dib.
Maahan sawirrida ay soo geliso Zelenska oo qura - waxaa jira sawirro oodda looga soo qaaday baraha bulshada oo muujinaya haween hubaysan oo xiran dharka ciidamada diyaarna u ah in ay galaan dagaalka ka socda Ukraine.
Qoysaskii ayaa kala abaaday iyadoo malaayiin qof oo haween iyo carruur u badan ay u carareen galbeedka si ay nabadgelyo u helaan, halka raggii iyo aabbeyaashii ay dalka ku hareen si ay magaalooyinka uga difaacaan duullaanka Ruushka.
Si kastaba ha ahaatee, haween badan oo ay ka mid tahay Zelenska ayaa ku haray dalka, waloow ay khatar weyn wajahayaan.
Hoos ka akhriso sheekooyinka shan haween ah oo furinta hore ee dagaalka ku jira.
Kira Rudik - 'Dagaalku waa mid cabsidiisa leh, balse waan caraysnahay'
XIGASHADA SAWIRKA,KIRA RUDIK
"Waligeey qori ma taaban dagaalka ka hor," ayay Kira Rudik oo ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka. "Mana ahayn wax mudnaan ii lahaa.
"Balse markii uu duullaanku bilowday oo aan helay fursad aan qori ku heli karo, aad baan ula yaabay in aan go'aansaday inaan qoriga qaato"
"Wuxuu ahaa wax culus oo sidii birtii iyo saliiddii u soo uraya".
Ilaa hadda maxaan ka ognahay dagaalka Ukraine? maxaa dhacay?
Wararki ugu dambeeyey dagaalka Ukraine
Colaadda Ukraine: Maxay tahay tallaabada xigta ee u furan Ukraine?
Rudik waxaa lagu daray ciidanka difaacaya magaalada Kyiv, waxaana loo dababarayaa sidii ay u difaaci lahaayeen caasimadda Ukraine.
Way qarisaa meesha ay joogto, waxayna sheegtay in ciidamada sirdoonku ay uga digeen in ay ku jirto liiska madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin's ee la baadigoobayo.
Iyadoo ay taasi jirto, waxay sii wadatay shaqadeedii sare ee hoggaanka xisbiga Codka ee baarlamaanka Ukraine, iyadoo sidoo kale ilaalinaysay xaafadeeda iyada iyo unugteeda.
Sawirka Rudik oo qorigeeda wadata ayaa markiiba ku faafay baraha bulshada, waxayna sheegtay in taasi ay soo jiidatay in haween kale ay qoryaha qataaan.
"Waxaa si gaaray farriimo badan oo ka imaanaya haween ii sheegaya in ay dagaallamayaan." ayay BBC-da u sheegtay.
"Ma naqaan waxa uu dagaalkani ku dambayn doono, laakiin waxaan ognahay in dhammaanteen ay tahay in aan dagaalanno si aan u ilaalino sharafteena, jirkeena, caruurteena.
"Dagaalku waa mid cabsidiisa leh, balse waan caraysanahay, waana waxa keenaya in aan dalkayga u dagaallamo.
44-ta milyan ee qof ee ku nool Ukraine, 23 milyan oo ka mid ah waa haween, sida uu sheegay Bangiga Adduunku, waxaana ciidamada dalkaas ku jira saami badan oo haween ah.
Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in 15.6% ka mid ah askarta ay haween yihiin, tiradaas oo laba jibbaarmatay tan iyo sannadkii 2014-kii.
Tiradaas ayaa hadda sidii hore aad uga badan ka dib markii bishii December lagu dhawaaqay in dhamaan haweenka da'doodu ay u dhaxayso 18-60 jir ee jir ahaan caafimaad qaba ay iska diiwaan geliyaan ciidamada.
Wali ma cadda tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay dagaalka Ukraine tan iyo markii uu Ruushku ku soo duulay, balse masuuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in dad rayid ah oo kun qof kor u dhaafaya ay dhinteen tan iyo markii uu duullaanku bilowday 24-kii Feberaayo.
Suurto gal maahan in tiradaas la xaqiijiyo, balse warbixin ay Qaramada Midoobay soo saaraty 8-kii March ayaa lagu sheegay 516 qof ay dagaalku ku dhinteen.
Sidoo kale, waxaa la rumeysan yahay in kumanaan ka tirsan labada dhinac ee dagaallamaya ay naftooda ku waayeen iyadoo wararka ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalkas ay qabsadeen warbaahinta caalamka, waxaase aad uga sii badan dadka dagaalkaas ku dhaawacmay.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in labadii toddobaad ee ugu horreeyey dagaalka ay dhinteen 1,300 oo askari oo reer Ukraine ah.
Marharyta Rivachenko - 'Ma jirto meel aan u cararayo'
XIGASHADA SAWIRKA,MARHARYTA RIVACHENKO
Marka laga soo tago siyaasiyiinta, haweenka caadiga ah ayaa sidoo kale si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaya dadaalka dagaalka.
Dhowr maalmood ka hor inta uusan duullaanku billaaban, Marharyta Rivachenko waxay ula dabaaldegtay dhalashadii 25aad ee Budapest, Hungary, iyada iyo saaxiibadeed.
Hadda, waxa ay baratay sida loogu seexdo dhawaqa rasaasta iyo duqaymaha ay Ruushku ku hayaan magaaladeeda.
"Markii uu dgaaalku bilowday qoyskaygu waxay ku sugnaayeen Kharkiv aniguna waxaan kaligay joogay Kyiv. ma haysan meel aan u cararo" ayay BBC-da u sheegatay.
"Ma rabin inaan baxo, waxaan rabay inaan wax uun sameeyo, sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan ku biiro difaaca dhulka."
Rivachenko waxay qaadatay koorasyada gargaarka degdegga ah si ay u noqoto dhakhtarad ka tirsan guuteeda oo hadda waxay si mutadawacnimo ah u noqotay kaaliyaha kalkaalisada.
Aad ayaan u cabsanayaa," ayay tidhi. "Waan jeclahay nolosheyda, waxaana doonayaa inaan noolaado, laakiin nolosheydu waxay ku xiran tahay dagaalkan, marka waa inaan wax ka qabtaa sidii aan u joojin lahaa."
Yustyna Dusan - 'Mudnaantayda koowaad waa inaad badbaado'
XIGASHADA SAWIRKA,YUSTYNA DUSAN
Qof kastaa ma awoodo inuu ku biiro unugyada difaaca dhulka sababtoo ah waxay haystaan tabaruceyaal aad u badan oo aan qof kastaa haysan waayo-aragnimo ku filan oo uu ku badbaado.
Lataliyaha shaqaaleysiinta IT Yustyna Dusan waxay u istaagtay wax kasta oo ay ku caawin karto dalkeeda.
"Hadda waxaan ku jiraa kaydka, waxaanan diyaar u ahay inaan dagaallamo," ayay tidhi. "Waxaa la ii daadgureeyay Lviv, maadaama aanan haysan hub ama baabuur si aan u caawiyo, anigu kuma aan shaqayn Kyiv.
"Marka, waxaan hadda si mutadawacnimo ah ugu shaqaynayaa aag nabdoon si aan gacan uga geysto abaabulka sidii qalab iyo gargaar bini'aadanti loogu soo celin lahaa jiidda hore."
Dagaalka ka hor Dusan waxay u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda xayawaanka. Laakin, waxay sheegtay in aysan hadda lahayn awood shucuureed oo ay xoolaha uga werwerto.
"Waa masiibo in xayawaanka lagu dayaco magaalooyinka si ay u dhintaan," ayay tiri. "Laakin muhiimadeyda ayaa ah inaan noolaado, si aan u caawiyo ciidamada qalabka sida oo istaagi doona ilaa dhamaadka.
"Carruurteena way dhimanayaan, waxayna rabaan inay dilaan qof kasta oo Yukreeniyaan ah, waxaanan dareemaynaa kalinimo.
"Waxaan rabaa in aan la i dilin."
Olena Biletskyi - 'Waxaan rabaa in gabadhaydu ay ku dhalatay Ukraine oo xor ah'
XIGASHADA SAWIRKA,UKRAINE WOMEN'S GUARD
Guriga qareenkii hore Olena Biletskyi ayaa noqday hooyga haweenka Ukraine ee dagaalka u tafaxaytay.
Waxay leedahay uur lix bilood ah, waxayna go'aansatay in ay la joogto ninkeeda iyo labadeeda gabdhood oo ku sugan Kyiv, oo da'doodu tahay 11 iyo 16, si ay gacan uga geystaan difaaca magaalada.
"Waxaan abaabuleynaa haweenka iska caabinta dalka oo dhan," ayay tiri.
"Wuxuu ahaa go'aan qoys oo ah inaan joogno oo aan dagaalanno, sababtoo ah ma doonayno inaan ku hoos noolaano gumeysi.
"Waa su'aal u dhaxaysa addoonsiga iyo xorriyadda, tanina waa dareenka haweenka waddanka oo dhan. Markaa waxaan sii joogi doonnaa Kyiv inta aan awoodno."
Iyada iyo ninkeeda Oleksandr waxay isku dubarideen shaqo awood iyo maskax u baahan oo ah in dadka rayidka ah loo diyaariyo dagaal.
Dadaalkooda waxaa ka mid ah tababar ku saabsan sida loo sameeyo Molotov cocktails, sida loo isticmaalo qoryaha darandooriga u dhaca iyo daabacaadda macluumaadka 33 luqadood boggooda internetka.
Ururka Biletskyi waxa kale oo uu ka shaqeeyaa in uu carqaladeeyo calaamadaha ultraviolet-ka oo ay rumaysan yihiin in ay sameeyeen ciidamada Ruushku si ay ugu adeegaan bartilmaameedyada gantaalada iyo kuwa daba-galka ah - oo ay ku jiraan qoyskeeda oo laga helay beertooda.
"Maalmihii ugu horreeyay cabsida iyo welwelku waxay ahaayeen kuwo xad dhaaf ah," ayay tidhi. Laakiin hadda ma jirto cabsi, kaliya rabitaan ah in laga adkaado cadowga.
"Ma rabin inaan cararo, mana qorsheynayo inaan cararo.
"Ma garanayo inaan sii noolaan doono, laakiin waxaan rabaa inaan noolaado oo aan ku riyoodo in aan gabadheyda saddexaad ku helo Ukraine xor ah oo madax-bannaan."
Yaryna Arieva - ' Wax cabsi ah ima hayso"
XIGASHADA SAWIRKA,MIKHAIL PALINCHAK
Subaxdii uu Putin u dhaqaaqay inuu ku duulo Ukraine, Yaryna Arieva waxay maanka ku haysay in ay guursato - wayna ka dhabaysay.
Waxay si gooni ah u kala noolaayeen ninkeeda, Svyatoslav Fursin, labada lamaane waxay rabeen inay wada joogaan inta dagaalka lagu jiro
Lammaanaha cusub ayaa markaa ku biiray difaaca dalka si ay gacan uga gaystaan difaaca Kyiv.
"Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan ku ilaalin karo dalkayga iyo magaaladayda," ayay tiri.
"Halkan hantideydu waa halkaan, waalidkey waa halkaan, bisadeyda waa halkaan, wax walba oo aan jeclahay waa halkaan sidaa darteed kama tagi karo Kyiv waanan dagaalami doonaa hadii ay noqoto."
Arieva waa ku xigeenka golaha deegaanka ee Kyiv, taasoo la macno ah in lagu soo saaray hub iyo hub. Waxay u guurtay saldhigga difaaca dhuleed iyada iyo ninkeeda, laakiin ma laha khibrad ku filan oo ay ku galaan hawlgallada dagaalka weli.
Taas beddelkeeda, waxay sugtaa maalmo dhammaad ah, oo tukanaysa, sigaar cabbinaysa, oo shaqaynaysa, iyada oo sugaysa warka ninkeeda, oo dagaalka ka socda.
"Dagaalka ka hor aad ayaan u cabsan jiray, waxaan ka baqi jiray eeyaha, mugdiga," ayay tiri gabahdan 21-jirka ah.
"Laakin hadda, cabsida kaliya ee aan qabo waa in aan waayo ninkeyga - uma baqayo nafteyda.